Immisa ayey Noqonaysaa Qiimaha Infographics? (Iyo Sida Loo Badbaadiyo $ 1000) | Martech Zone
Immisa ayey Noqonaysaa Qiimaha Infographics? (Iyo Sida Loo Badbaadiyo $ 1000)
Axad, Janaayo 10, 2016 Isniin, Janaayo 11, 2016 Douglas Karr
Ma jiro toddobaad ka soo gudbaya oo aynaan ku lahayn infographic marxalad kasta oo soo saarkeeda ah DK New Media. Kooxdayada istiraatiijiyadeed waxay si isdaba joog ah u raadinayaan mowduucyo gaar ah oo looga faa'iideysan karo xeeladaha suuqgeynta macaamiishayada. Kooxdayada cilmi baarista waxay ka soo ururiyaan cilmi baaris cusub dugsiga sare agagaarka internetka. Sheekadeheena sheekadu wuxuu qorayaa sheeko ku saabsan fikradaha aan la nimid. Naqshadayaasheena waxay ka shaqeynayaan sidii ay u horumarin lahaayeen sheekooyinkaas muuqaal ahaan.
Ganacsiyada daabaca #infographics waxay leeyihiin 12% mugga taraafikada
Inta badan suuqleyda waxyaabaha ku fekeraya waxay u maleynayaan in sawir-gacmeedka uu si fudud u duubmayo tiro xog ah iyo tirakoobyo ku saabsan goob la siiyay. Ugh… waxaan ku aragnaa kuwan shabakada oo dhan weligoodna ma wadaagi karno inay jiraan mooyee wax si layaab leh u qasbaya oo ku saabsan qaar ka mid ah tirooyinka la helay. Waxaan rumeysanahay in istiraatijiyad isku dheelitiran ay sheegeyso sheeko murugsan, muuqaal ahaan waxay bixisaa cilmi baaris taageerta, waxaa loo habeeyay daawashada bogagga iyo aaladaha kala duwan, waxayna ku dhammaaneysaa wicitaan wicitaan-ku-dirqi ah oo loogu talagalay in lagu daawado daawadayaasha go'aanka.
Maxay Yihiin Waxyaabaha Saamaynta Ku Yeelanaya Qiimaha Macluumaadka?
Waxaa jira tiro shaqo ah oo ku lug leh mid kasta iyo faahfaahin kasta oo aan horumarinno, laakiin wali si macquul ah ayaan u qiimeyneynaa marka la barbar dhigo shirkadaha kale. Infographics way ku kala duwanaan karaan qiimaha si ballaaran - laga bilaabo dhowr boqol oo doolar oo loogu talagalay naqshadeynta, illaa tobanaan kun oo doollar wax soo saar buuxa, dallacsiin iyo xayeysiin. Waa kuwan noocyada su'aalaha aad u baahan tahay inaad weydiiso markii hay'ad ay horumarineyso xogtaada soo socota?
Research - Miyaad horeba u haysatay dhammaan cilmi-baarista iyo xogta lagama maarmaanka u ah sawirka-muuqaalka? Mid ka mid ah tusaale ahaan tan ayaa ah markaad daabacayso ebook ama warqad cad - sida caadiga ah waxaad leedahay dhammaan cilmi-baarista aad u baahan tahay halkii aad geyn lahayd ilo aad ku hesho xogta. Haysashada xogtaadu waxay badbaadin kartaa wakhti - laakiin badiyaa kuma filna inaad bedesho qiimaha.
brandingeksperten - Mararka qaarkood waxaan si adag u shaqeynaa si aan u calaamadeysno faahfaahinta saxda ah sida macaamiisheena, waqtiyada kale waxaan u shaqeynaa si aan u calaamadeysano iyaga gebi ahaanba ka duwan. Haddii akhristayaashu ku arkaan astaantaada meel kasta, waxaa laga yaabaa inaadan gaarin rajo cusub ama aadan helin wax badan oo wadaag ah oo ku saabsan macluumaadkaaga. Waxay u muuqan kartaa in badan oo iibku u janjeedha oo macluumaad yar. Dabcan, haddii aad tahay nooc cusub waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu bilaabi karo dhismaha aqoonsigaaga! Joogtaynta heerarka calaamadeynta adag ayaa kor u qaadi kara qiimaha adeegyada nashqadeynta.
Jadwalka - Inta badan qormooyinkayagu waxay u baahan yihiin dhowr toddobaad oo shaqo ah, laga bilaabo qorsheynta illaa wax soo saar, si loo xaqiijiyo guusha. Daacadnimo dhan, sida caadiga ah kuma bixinno soo-jeedin wax ka yar mooyee inta badan dadaalka ku lugta leh uu noqon doono mid aad u yar. Markii aan ka soo saarnay sawir-qaadis xoqid ah xilligii gaagaaban, ma aanan arag natiijooyinka sidii markii la siiyay daryeelka iyo taxaddarka ay mudan yihiin. Sida mashruuc kasta, waqtiyada adag ayaa adkeeya kharashyada.
dhegeystayaasha - Iyadoo Martech Zone, Waxaan ku jirnaa mowqifka loo baahan yahay si aan ugu dhiirrigelino suuqgeynteena iyo faahfaahinta iibka la xiriirta ee dhagaystayaasheena, taas oo ah cabir la taaban karo oo leh cagaarsho xagga warshadaha. In kasta oo wakaalado kale lacag ka qaadaan dejinta iyo dhiirrigelinta, haddana inta badan waan iska dhaafi doonnaa kharashkaas oo waxaan u sii deyn doonnaa beesheena oo waxay qabataa wax ka badan wixii laga filayo.
Hantida - Shaqo aad u badan ayaa galeysa macluumaadka macaamiisheenna mana aaminsani inay tahay inaan qabanno feylasha garaafka ee la dhammaystiray. Waxaan badanaa u abuuri doonnaa labadaba bandhig ama nooca PDF iyo sidoo kale nooc toosan oo toosan oo web-ku habboon macaamiishayada. Wali waxaan ku wareejineynaa feylasha iyaga, in kastoo, si kooxaha suuqgeyntooda ay ugu dhex milmi karaan ugana soo celin karaan sawirada iyo macluumaadka dammaanad kale oo la qeybiyay. Taasi waxay hagaajinaysaa soo noqoshada maalgashiga si weyn.
Times - Hal infographic wuxuu ku yeelan karaa saameyn la yaab leh shirkad. Si kastaba ha noqotee, wax badan ayaa laga baran karaa soo saarista macluumaadka ugu horreeya ee loo isticmaali karo in lagu sii wanaajiyo faahfaahinta mustaqbalka. Sidoo kale, haddii ururinta faahfaahinta si isku mid ah loo qaabeyn karo, waxaa jira kayd kharash ah wadada. Waxaan si aad ah ugu talineynaa inaad la saxiixato macaamiisha ugu yaraan 4 infographics - midkiiba afar meelood meel kadibna daawashada sida ay wax u qabtaan bilaha kadib daabacaadda.
Gudbinta - Infographics waa wax layaableh, laakiin in laga daawado iyadoo la adeegsanayo xayeysiinta lacagta la siiyay wali waa hab fiican oo loo maro. Waxaan ku siineynaa dhiirigelin dhexdhexaad ah macaamiisha 'infographics' iyada oo loo marayo barnaamijyada sida Xayeysiinta StumbleUpon. Si ka duwan waxyaabaha caadiga ah, uma baahna ololeyaal socda. Olole hordhac ah oo lagu kordhinayo aragtida hore wuxuu ku filnaan karaa in la wadaago oo lagu daabaco bogagga aadka ugu habboon internetka oo dhan.
Buuxinta - Haddii aad leedahay koox xiriirka dadweynaha ka tirsan gudaha ama wakaaladda xiriirka dadweynaha oo kula shaqeynaya, Infographics waa wax la yaab leh oo lagu tilmaami karo kuwa saamaynta ku leh daabacaaddooda. Adeegyadan noocan ahi way labanlaabmi karaan kharashka infographic-ka, in kastoo, sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad qiimeyso haddii aad u baahan tahay inaad kordhiso daawashada (sida waxyaabaha ku jira waqtiga ku habboon) ama aad u tagto istiraatiijiyad dardar-ku-saleysan oo muddo-dheer ah halka laga helayo. jir ahaan.
Haddaba Immisa ayey ku kacaysaa Qiimeynta Macluumaadka ahi?
Hal infographic ah, waxaan ku dalacnaa mashruuc mashruuc ah $ 5,000 (US) oo ay kujirto dallacsiin (ma ahan duubis) oo waxaan u celineynaa dhammaan hantida macaamiisheena. Xogta saddexda biloodle ah ayaa hoos u dhigta qiimaha sawir-qaadista midkiiba $ 4,000. Faahfaahin bille ah ayaa hoos u dhigta qiimaha $ 3,000 sababtoo ah waxtarka aan awoodno inaan ku dhisno geeddi-socodka. Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto haddii aad hayso wax su'aalo ah ama faallo ah - ama haddii aad jeclaan lahayd inaad bilowdo!
[sanduuqa nooca = ”guusha” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”90%”] Mention ga maqaalkan la xiriir hay'addayada oo waxaan kaa dhimeynaa macluumaadkaaga ugu horreeya $ 1,000. Ama isticmaal "infographics2016" goorta dalbashada khadka tooska ah[/ sanduuqa]
Waxaan sidoo kale leenahay qiimeynta wakaaladda halka aan ku horumarinayno qaab-dhismeedka macluumaadka hay'adaha kale - xiriirka dadweynaha iyo naqshadeynta labadaba. Faahfaahin ila soo xiriir.
Waa maxay ROI ee Xog-ogaalnimo?
Infographics runtii waa qayb ka mid ah waxyaabaha sixirka. Infographics-ka ayaa bixin kara labada xogoodba sidoo kale waxay kaa caawin kartaa sharraxaadda geeddi-socodka adag.
Wadahadal - Infographics waxay ku wadi kartaa beddelaad iyada oo loo marayo garashada korodhka iyo awoodda.
Sales - Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheenna iibka gudaha iyo dibedda ee iibku waxay u adeegsadaan sawir-qaadis si ay u kobciyaan oo ula macaamilaan rajooyinka. Waxay sameeyaan dammaanad iib weyn.
Wadaagista - Infographics-ka wuxuu ku faafi karaa si fir fircoon wuxuuna dhisi karaa aqoonsi sumcad iyo hey'ad internet ah.
Bulshada - Infographics waa waxyaabo bulsheed oo layaableh oo si fudud loola wadaagi karo barnaamaj kasta oo warbaahinta bulshada ah (oo ay ku jiraan kuwa iyaga ka shaqeeya iyo soosaarida fiidiyow iyaga ka baxsan).
Raadinta Dabiiciga ah - Infographics-ka oo lagu daabaco dhammaan boggaga khuseeya waxay kexeeyaan xiriirinno awood sare leh iyo qiimeyn loogu talagalay macaamiisha sida joogtada ah u geeya.
Evergreen - Infographics badanaa waxay bixiyaan taas oo dib loo rogi karo bil ka bil iyo mararka qaarkood sanadka sanadka.
Soo noqoshada maalgashiga ee Infographic laguma qiyaaso maalmo ama toddobaadyo, badanaa waxaa lagu qiyaasaa bilo iyo sannado. Waxaan haysannay macaamiil noosheegtay dhowr sano kadib inay wali yihiin bogagga ugu sarreeya ee lagu booqdo degelladooda.
Hubi Boosteejadayada Dalbo Macluumaad Hadda ah!
Tags: waa immisaintee in le'eg ayey ku kacaysaa faahfaahinta sawirkuxubno infographicarrimo infographicistaraatijiyad infographicmacluumaad jaantus ahMacluumaadka Suuqgeyntadammaanadda iibka
Immisa ayey Ganacsiyadu maalgashi ku sameynayaan Xeeladaha Suuqgeynta Mawduucyada?